नेकपाका दुबैपक्ष आन्तरिक छलफलमा : एकहप्ताभित्रै नयाँ सहमतिको सम्भावना ! | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
नेकपाका दुबैपक्ष आन्तरिक छलफलमा : एकहप्ताभित्रै नयाँ सहमतिको सम्भावना !
access_time२०७७ साल श्रावण १४ गते, बुधबार ०२:०५ PM chat_bubble_outline Comments folder_open राजनीति
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' छुट्टा-छुट्टै छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले स्थायी कमिटीको अर्को बैठकको मिति तोक्ने जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएको थियो ।
बिहानैदेखि नेताहरु सक्रिय
वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'ले पनि पार्टी विभाजन नहुँने तरिकाले निकास निकाल्ने भन्दै छलफललाई तिब्रता दिएका छन् ।
छलफलले निकास देला ?
अहिलेसम्म नेताहरु विभिन्न विकल्पमा छलफलमा जुटे पनि कुनै सहमतिको ठोस विषयबस्तुमा संवाद केन्द्रित हुन सकेको छैन । अबका एकदुई दिन दुवै पक्षले शक्ति संचय गर्ने र अर्कोविरुद्ध दबाब बढाउनमा केन्द्रित गर्ने देखिएको छ ।
ओली पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने महाधिवेशनमा जानेगरी एकहप्ताभित्रै सहमतिमा आउनुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, 'उहाँहरु एकहप्ताभित्रै महाधिवेशनमा जानेगरी सहमतिमा आउनु हुन्छ । नआएको अवस्थामा हामी हाम्रो तरिकाले र उहाँहरु उहाँहरुकै तरिकाले अगाडि बढ्नु हुन्छ । हिजोको बैठकले उहाँहरुमा सहमतिका लागि दबाब परेको छ । एकहप्ताभित्रै नयाँ ठाउँमा पुगिन्छ होला ।'
प्रचण्ड निकट स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सहमतिको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, 'जनचाहना अनुसार र आम कार्यकर्ताको भावना अनुसार नेतृत्व सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सहमतिको विकल्प छैन ।'
नेपाल निकट एक नेताले भने, 'हामीलाई बहुमत छैन भन्नु हुन्थ्यो । हामीले सांकेतिक मात्र देखाएका हौँ । उहाँले अहंकार र दम्भ त्यागेर आएमा सहमतिको सम्भावना छ । अब धेरै दिन कुर्न सकिँदैन । उहाँले फेरि पनि खेल्न खोजेको देखिएको छ । हामीले एकदुई दिनमै फेरि बैठक राख्न दबाब दिन्छौँ । दुवै अध्यक्ष तयार नभएर हिजो भन्दा धेरै साथीहरुको उपस्थितिमा बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ ।'
भोलीसम्ममा ओली प्रचण्ड भेटवार्ता हुने र त्यसैका आधार ३/४ दिनभित्रै फेरि अर्को बैठक बस्ने जानकारी एक स्थायी कमिटी सदस्यले दिएका छन् । त्यसका लागि घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरु सक्रिय भएका स्रोतको भनाइ छ ।